प्रेममा परेपछि तपाईंको जीवनमा आएको ठूलो परिवर्तन के हो ?
इन्दिरा श्रेष्ठ,२३, काठमाडौँ
मे रिलेसनमा बसेको सात वर्ष भयो। वहाँ मेरो छिमेकी हुनुहुन्छ। साथीको घरमा हाम्रो पहिलो पटक भेट भएको थियो। बिस्तारै कुरा हुन थाल्यो र हाम्रो लभ पर्‍यो। रिलेसनमा बस्न थालेपछि म निकै केयरिङ हुन थालेँ। सानो–सानो कुरामा ख्याल गर्छु। भविष्यको विषयमा सोच्न थालेकी छु। केटाकेटीपन पार गरेर जिम्मेवार भएजस्तो लाग्छ।
विश्व पाण्डे, २४, नवलपरासी
ऊ मेरो पहिलो प्रेम हो। ऊसँग मैले फेसबुकमार्फत कुराकानी गरेको थिएँ। बिस्तारे कुराकानी प्रेममा परिणत भयो। अहिले ऊसँग प्रेममा परेको एक वर्ष भयो। प्रेममा परेपछि ममा धेरै परिवर्तन आए। पहिले–पहिले केटाहरूसँग बरालिन्थेँ। अहिले त्यस्तो छैन। पहिले धेरै फिल्म हेर्थें। सिरिजहरू पनि हेर्थें। तर, अहिले त्यो सब बन्द भइसक्यो। अहिले कामलाई महत्त्व दिन थालेको छु। ऊसँग प्रेममा परेपछि मलाई समय व्यर्थ खेर फाल्नु हुन्न, भविष्यको ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने बोध भएको छ।
रोशन भुजेल, २२, काठमाडौँ
मेरो लभ परेको करिब एक वर्ष हुन थाल्यो। उसलाई मैले यात्रा गर्दै गर्दा भेटेको थिएँ। गाडीमा इन्स्टाग्राम साटासाट भयो र हाम्रो कुराकानी सुरु हुन थाल्यो। बिस्तारै प्रेम भयो। प्रेममा परेपछि मेरो जीवनमा आएको ठूलो परिवर्तन भनेको म्याचुरिटी हो। पहिले म सम्बन्धका बारेमा त्यति गम्भीर थिइनँ। अहिले मलाई सम्बन्ध के हो ? कसरी निर्वाह गर्नुपर्छ ? भन्ने विषयमा ज्ञान भएको छ।
इशा गुरुङ, २३, नवलपरासी
व्यवहार भनेको परिवर्तन भइरहन्छ। कुनै बेला आफसे आफ परिवर्तन हुन्छ भने कुनै बेला समय र परिस्थितिले गर्दा परिवर्तन हुन्छ। रिलेसनमा बसेपछि ममा पनि केही साना–ठूला परिवर्तन देखिए। पहिले म ससाना कुरामा पनि रिसाउँथेँ। अहिले मैले रिस व्यवस्थापन गर्न सिकेकी छु। परिस्थितिअनुसार आफूलाई ढाल्न सिकेकी छु। जसले गर्दा जीवनमा धेरै सहजता आएको छ।
अनुप घिमिरे, २२, दोलखा
सम्बन्धले मलाई धेरे कुरा सिकाएको छ। मेरो जीवन परिवर्तन भएको छ। सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन भनेको मलाई आफ्नो जिम्मेवारीको हेक्का हुन थालेको छ। प्रेममा पर्नुअघि मलाई यस्तो महसुस भएकै थिएन। त्यसै गरी, समय र परिस्थितिसँग घुलमिल हुन सिकेको छु। कुन अवस्थामा कोसँग कस्तो व्यवहार गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा भएको छ।
विकास न्यौपाने, २२, पर्वत
म पहिलेदेखि नै अलि लज्जालु स्वभावको थिएँ। कसैसँग बोल्नुपर्‍यो भने असजिलो लाग्थ्यो। प्रेममा परेपछि म खुल्न थालेको छु। आफ्ना कुरा प्रस्ट राख्न सक्ने भएको छु। यो मैले गर्लफ्रेन्डसँग सिकेको कुरा हो। उनले मेरो जीवनमा धेरै परिवर्तन ल्याइदिएकी छिन्। सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन के हो भने मलाई जिन्दगी सुन्दर लाग्न थालेको छ। प्रेममा पर्नुअघि जिन्दगी ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट थियो, प्रेममा परेपछि कलरफुल भएको छ।
तिर्साङ लामा, २४, काठमाडौं
सम्बन्धमा बाँधिएपछि जीवनमा केही न केही परिवर्तन आउँदो रहेछ। मेरो जीवनमा पनि केही परिवर्तन भएका छन्। पहिले आफ्ना बारेमा मात्र सोचिन्थ्यो भने अब कुनै निर्णय लिँदा दुवैको बारेमा सोच्न थालेको छु। अरूलाई पनि ख्याल गर्न थालेको छु। यसलाई परिपक्वता भन्न सकिएला। प्रेममा परेपछि नराम्रा बानी भएका साथीहरूको संगत पनि छुटेको छ। साह्रोगाह्रो पर्दा गर्लफ्रेन्डले सघाउने गरेकी छिन्। मेरो जीवनमा प्रेमले ल्याएको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन भनेको म अहिले अरूका दुःखमा साथ दिन सक्ने भएको छु।
कृष्ण कार्की, ३५, काठमाडौँ
मेरो बिहे भइसक्यो। हामी लामो समय सम्बन्धमा बस्यौँ। प्रेमले मेरो जीवनमा ल्याएको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन जिम्मेवारीबोध हो। पहिले म एक्लो थिएँ। कसैको पर्वाह गर्दैन थिएँ। तर, प्रेममा परेपछि जीवनमा अरूका निम्ति पनि केही भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान पाएँ। आफूमा धैर्य र सहनशीलताजस्ता गुण थपिएको अनुभव गरेको छु।
विवेक थापा, २२, कास्की
प्रेममा परेपछि म आफ्ना कुरा खुलस्त र स्पष्ट राख्न सक्ने भएको छु। पहिले त म कसैसँग खुल्दैन थिएँ। मेरा साथी पनि कम थिए। उनीसँग प्रेममा परेपछि मैले साथी, आफन्त र परिवारको महत्त्व के हुन्छ भन्ने बुझेँ। प्रेमले मलाई दिएको अर्काे महत्त्वपूर्ण कुरा हो, हिम्मत। अहिले मलाई जे गर्न पनि आँट आउँछ। उनको साथ पाएँ पनि संसारसँग पनि लड्न सक्छुजस्तो लाग्छ।
सरस्वती श्रेष्ठ, २७, काठमाडौँ
म वैवाहिक सम्बन्धमा बाधिइसकेँ। जीवनमा धेरै परिवर्तन आएका छन्। विवाहअघि आफ्ना बारेमा मात्र सोचिन्थ्यो। अरूका प्रति पनि जिम्मेवारी हुन्छ भन्ने कुरा थाहा थिएन। अहिले त घरपरिवारको मात्र चिन्ता हुन्छ। बिहेअघि ‘आई’ भन्ने गरिन्थ्यो भने अहिले ‘वी’ भनिन्छ। परिवारका लागि जस्तोसुकै त्याग गर्न परे पनि पछि हट्दिनँ।
सुषमा घिमिरे, २२, काठमाडौँ
सम्बन्धमा परेपछि जीवनमा केही परिवर्तन देखिएका छन्। प्रेम निर्वाह गर्न सजिलो छैन। मैले यसो गर्दा उसलाई दुःख लाग्छ कि उसलाई चोट पर्छ कि भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ। प्रेमले मलाई अरूको केयर गर्न सिकाएको छ। सम्बन्धको महत्त्व बुझेकी छु। प्रेममा परेपछि म जीवनप्रति, करिअरप्रति र सम्बन्धप्रति गम्भीर र फोकस्ड भएकी छु।